နှစ်ကူးကြိုပွဲတော် မြန်မာပြည်တွင် အကြီးအကျယ် ကျင်းပမည် | ဧရာဝတီ
နှစ်ကူးကြိုပွဲတော် မြန်မာပြည်တွင် အကြီးအကျယ် ကျင်းပမည်
ရန်ပိုင်| December 21, 2012 | Hits:6,430
| | လာမည့် ၂၀၁၃ နှစ်သစ်ကူးကြိုပွဲတော် (New Year Countdown) ကို ရန်ကုန်မြို့ မြို့မကွင်း (မိုင်ဒါကွင်း) တွင် ထိုင်းဘတ် ၃၅ သန်း အကုန်အကျခံကာ အကြီးအကျယ် ကျင်းပရန် ထိုင်းနိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံးသော ပွဲစီစဉ်ရေးအဖွဲ့ Index Creative Village က ကြိုးပမ်းနေကြောင်း ယမန်နေ့ထုတ် ဘန်ကောက်ပို့စ် သတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ပွဲစီစဉ်ရာတွင် ကမ္ဘာ့နံပါတ် ၇ နေရာရှိသည့် Index Creative Village ကုမ္ပဏီသည် ယခုနှစ်သစ်ကူးပွဲကို ထိုင်းဘတ် ၃၅ သန်း အကုန်အကျခံကာ စီစဉ်မည်ဖြစ်ပြီး၊ ထင်ရှားသည့် မြန်မာအနုပညာရှင်များလည်း ပါဝင်ဖျော်ဖြေမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ အသံဖမ်းစက်များ၊ မီးဆလိုက်များကို အသုံးပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါအဖွဲ့၏ တွဲဖက် အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် မစ္စတာ ကရမ်ကရိုဏ် ကန်ချနဖိုခင်က ပြောသည်။
“ကျနော်တို့ မြန်မာပြည်အတွက် လမ်းကြောင်း အသစ်နဲ့ ပျော်ရွှင်စရာ အခမ်းအနားဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်မှာပါ။ အရင်က ဒီလို ကျင်းပဖူးတာမျိုး မရှိလို့ မြန်မာပြည်မှာ Countdown နှစ်သစ်ကူးကြိုပွဲတော်ကို သေချာ ဆင်နွှဲခဲ့ကြတာ မရှိဘူး” ဟု မစ္စတာ ကရမ်ကရိုဏ် ကန်ချနဖိုခင်က ဘန်ကောက်စ်ပို့သို့ ပြောထားသည်။
ကြော်ငြာ လုပ်ငန်းများမှ စပွန်ဆာရရှိမည်ဟု မျှော်မှန်းထားကြောင်း၊ နှစ်သစ်ကူးပွဲကို ပရိသတ် ၅ သောင်းခန့် ပါဝင်ဆင်နွဲနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ထားပြီး ရန်ကုန်မြို့အပြင် တခြားမြို့ကြီးများမှလည်း လာရောက်မည်ဟု ထင်ကြောင်း၊ အခမ်းအနား လုံခြုံရေးအတွက် အစိုးရကို အကူအညီတောင်းခံထားကြောင်း မစ္စတာ ကရမ်ကရိုဏ် ကန်ချနဖိုခင်က ဆက်လက် ပြောသည်။
ညနေ ၆ နာရီ ည ၁ နာရီခန့်အထိ ကျင်းပမည့် အဆိုပါ ဖျော်ဖြေပွဲကို ၀င်ကြေးအခမဲ့ သတ်မှတ်ထားပြီး နာမည်ကြီး Heaven Born နှင့် The Ugly တီးဝိုင်းများက ပင်တိုင်တီးခတ်ကာ Big Bag နှင့် Idiot အပါအ၀င် တခြားသော Band များ၊ ဟစ်ပ်ဟော့ အဆိုတော်များ၊ အကများ ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် နှစ်သစ်ကူး အခမ်းအနားကို Forever Group နှင့် ပူးပေါင်းကာ ရုပ်သံမှ တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့်မည် ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
ဖျော်ဖြေရာတွင် ပါဝင်မည့် အဆိုတော် သျှီက “ဒီနှစ်မှာ ထူးထူးခြားခြား အခကြေးငွေ မယူဘဲ လုပ်တယ်ဆိုတော့ လူတန်းစားအစုံ ကြည့်ရမယ့်ပွဲ ဖြစ်တဲ့အတွက် ပျော်ပါတယ်။ သူတို့အတွက် ပိုအဆင်ပြေတာပေါ့” ဟု ဆိုသည်။
New Year နှစ်သစ်အကြို ပွဲတော်ကို ယခင်က အနောက်တိုင်း အလေ့အထဟု ယူဆကာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ကျင်းပလေ့ မရှိသော်လည်း ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်မှ စတင်ကာ လူငယ်များအကြား ရေပန်းစာလာခဲ့ပြီး ရန်ကုန်နှင့် တခြားမြို့ကြီးများတွင် ဖျော်ဖြေရေး ပွဲများဖြင့် ကျင်းပလာခဲ့ကြသည်။
ဤ နှစ်သစ်ကူး အခမ်းအနားသည် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ တက်လာပြီးနောက်ပိုင်း နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တခုမှ ပထမဆုံးအကြိမ် လာရောက်ကျင်းပသည့် နှစ်သစ်ကူး ပွဲတော်ဖြစ်ပြီး မကြာသေးမီကလည်း ရွှေတိဂုံဘုရားခြေရင်း ပြည်သူ့ရင်ပြင်တွင် MTV Exit (End Exploitation and Trafficking) ၏ လူကုန်ကူးမှု တိုက်ဖျက်ရေး အထူးအစီအစဉ်အဖြစ် အမေရိကန်အဆိုတော် ဂျေဆန်မရက် (ဇ်) လာရောက် ဖြေဖျော်ခဲ့သေးသည်။
Comment	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ December 22, 2012 - 12:41 am	၀င်ကြေးခ မတတ်နိုင်လို့ သည်လို စင်မြင့် ဖျော်ဖြေပွဲတွေမှာ ပါဝင် မဆင်နွှဲနိုင်သူ အခြေခံ လူတန်းစားတွေအတွက် အဆင်ပြေပါတယ်။ တခုပဲ အကြံပေးချင်တာက ပြည်ပမှာ လုပ်တဲ့ ပွဲတွေမှာလဲ သီးသန့်ပွဲတွေမှာ အရက်သေစာ တည်ခင်း ဧည့်ခံပေမယ့် သည်လို လေဟာနယ်၊ လူထုနဲ့ လုပ်တဲ့ ပွဲတွေမှာ အရက်သေစာ ပေး မသောက်ပါဘူး။ သင်္ကြန်ပွဲလို လမ်းမပေါ် မူးမူးနဲ့ ဖြစ်ချင်တိုင်း ပေး မဖြစ်ပါဘူး။ နှစ်သစ်ကူးပွဲမှာ နှစ်သစ်ကူးချိန်မှာ indoor party တွေမှာ ရှန်ပိန်သောက်ပေမယ့် လမ်းမပေါ် အများပြည်သူနဲ့ ကျင်းပတဲ့ ပွဲတွေမှာ ရှန်ပိန် မသောက်ပါဘူး။ ဗမာ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ အညီ ကျင်းပကြရင် ကောင်းပါမယ်။ သင်္ကြန်မှာ လမ်းပေါ် လူရှေ့ မူးရူး၊ ဖက်ရမ်း၊ နမ်းရှုတ်၊ အမြင်မတော်တာတွေ တွေ့လာရလို့ပါ။ နှစ်သစ်ကူးချိန်မှာ ချစ်သူ ခင်သူနဲ့ အနမ်းဖလှယ် နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူမြင်မကောင်းအောင် ရာဂစိတ်တွေနဲ့ နမ်းနေတာမျိုး မဖြစ်သင့်၊ မလုပ်သင့်တာ ပြောတာပါ။ ကြင်နာအနမ်းကလေးတွေက ယဉ်ကျေးဘွယ် အမြင်လှပါတယ်။
Reply	Shwe Yoe December 22, 2012 - 7:01 am	Let the peopleachance to enjoy life. I wish you all, “Happy New Year”.
Reply	MYATTHULATT(BANGKOK) December 23, 2012 - 10:01 am	၀မ်းသာပါတယ် ဒီသတင်းကြားရတာ..HAPPY NEW YEAR 2013 FOR MYANMAR..